Ciidamada Xoogga Dalka oo galabta la wareegay Goobo ay ku sugnaayeen Kooxda Shabaab.(daawo sawirada) | HALGANKA.NET
127 لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ
وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ Waxayna Mudanyihiin Guri Nabadgalyo oo Eebahood Agtiisa ah Isagaana Gargaarahooda ah waxay Camal falayeen Dartiis. HALGANKA.NET
Dhegeyso:Waa maxay calaamadaha khawaarijtu?. Sh. Axmad Daahir ayaa sharaxaya!!
dhacdooyinka maanta(riix falaarta)
Dhageyso Sh. Muuse Cabdi Caraale oo ka hadlaya arrimo badan iyo C/llahi Colombo(riix falaarta)
There are currently 0 users and 216 guests online. Filimada/Videos
Ciidamada Xoogga Dalka oo galabta la wareegay Goobo ay ku sugnaayeen Kooxda Shabaab.(daawo sawirada)
Submitted by admin on Thu, 03/11/2010 - 00:47
Ciidamadda Dowladda Soomaaliya ayaa guulo ka gaaray dagaalo saaakay ka bilowday woqooyiga magaalada Muqdisho oo ay soo qaadeen maleeshiyaadka Dowladda Ka soo horjeeda.
Deegaano hor leh ayay cidamadu galabta la wareegeen sida fariisimo ay maleeshiyaadku ku lahaayeen deegaanka Beexaani, nasiib buundo iyo garaash geedoole, ayadoo ciidamada Dowladdu ay wali ku sii siqayaan goobo hor leh oo ka tirsan degmada Kaaraan.
Koox wariyayaal ah oo ka tirsan Radio Muqdisho ayaa gaaray goobta saakay iyo galabta dagaalku ka socday, waxaana goobta ay ku arkeen ugu yaraan 5 qof oo ajnabi ah oo ka barbar dagaalamayay maleeshiyada Shabaab, sidoo kale waxaa goobta yiilay ku dhawaad 8 qof oo Ahaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo la qalday, halka saakay ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 8 kale oo seddex ajaanib ah ay ku jireen waxaana ka mid ahaa Horjooge u dhashay dalka aljeeriya oo lagu magacaabi jiray Abuu muscab Al jazaa'iri, waxaana ku dhaawacmay saakay illaa 7 horjooge oo ay ku jiraan horjoogayaal Soomali ah oo mid ka mid ah lagu magacaabo macalin c/raxmaan roo lagu dabiibayo Cisbitaalka kaysaneey ee duleedka magaalada Muqdisho, Ciidamada xoogga dalka oo aad u xamaadasaysan, watana agabkooda militiray ayaa dagaalka ka qeyb galayay, waxaana jiidda hore ee dagaalka ka soconayay xeelado ciidan oo aad cajiib u ah, sida kala bedelidda askarta iyo gurmadka oo u muuqday mid aad looga soo shaqeeyay.
Taliyaha ciidamada Lugta Dowladda Soomaaliya General Cali Caraale Cosoble (gacma dulle) ayaa hogaaminayay Ciidamada oo ku sugnaa Afka hore ee dagaalka, wuxuuna si weyn ugu howlanaa dagaal gilinta ciidamada, ayadoo meesha ay ka muuqanaysay guul hor dhac ah oo laga gaaray dagaalkii maanta bilaawday.
Ka sokoow dagaalka waxaa goobta ka soconayay baaritaano ay sameynayaan Ciidamada Dowladda Soomaaliyeed, kuwaas oo guryaha baaraya si aysan u dhicin in maleeshiyaadku ay ku dhuuntaan guryaha laga barakacay ee maalmihii la soo dhaafay ay xoogga ku deganaayeen, waxayna gacanta ku soo dhigeen dhowr qof oo ka tirsan Meleeshiyadii dagaalamaysay oo uu ku jiro horjooge Shabaab ka tirsan.
Sidoo kale ciidamada ayaa baarayay wadooyinka waaweyn ee xaafadaha kaaraan iyo shibis mara, si ay uga saaraan hadii maleeshiyaadku ay halkaas ku aaseen miinooyin sida caadada u ah, iskastoo aan wali la arag wax miino ah oo halkaas laga bixiyay.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya waxaa ka muuqatay maanta tababarada ay ku soo qaateen dalka gudihiisa iyo Dibadiisaba, waxaa goobta dagaalka iyo nawaaxigeeda ka muuqday astaamo ciidan oo cusub, waxaay askartu ku libisnaayeen Tuutaha Ciidamada, waxaa u dheeraa qalabka askariga loogu talo galay, waxay u saconayeen qaab saf oo kale ah, ayagoo masaafo dhowr talaabo ah isu jiray mar kasta.
Waxay wateen agabkooda jiifka iyo xataa weelasha ay wax ku cunayaan, sidoo kale waxaa u dheeraa sahay KMG ah iyo gargaarka deg dega ah.
Gawaarida gargaarka degdega ah ayaa goobta joogtay, kuwaas oo loo qorsheeyay in ay caawiyaan Haddii ay ciidamada Dowladda ay soo gaarto dhibaato, ama dadka shacabka laftooda, sidoo kale goobta waxaa ku sugnaa koox caafimaadka qaabilsan oo ciidamada Qalabka sida ka tirsan.
Boqolaal shacab ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka woqooyiga magaalada Muqdisho, kuwaas oo soo dhaweynayay guusha ay Ciidamada XDS ay ka gaareen weerarkii ay saakay maleeshiyaadku ku soo qaadeen woqooyiga magaalada, kuwaas oo si farxadi ka muuqato u fiirsanayay guryahooda oo muddo ka haysteen maleeshiyaadka Dowladnimada Diidan ee dagaalada ka wada dalka Soomaaliya.
Dhinaca Maleshiyaadka soo duulay.
Maleeshiyaadka Shabaab iyo Xisbul islaam uma kala harin Dagaalka saakay inkaastoo ay isku hagradeen, maleeshiyada Shabaab waxay afka hore ee dagaalka saakay soo geliyeen ajaanib fara badan oo maalmihii la soo dhaafay lagu uruurinayay woqooyiga magaalada Muqdisho, waxay filayeen in ay dhagartooda guul ku helayaan, hase yeehsee horjoogayaal badan ayaa uga dhintay dagaalka, dadka ku nool woqooyiga Muqdisho ayaa sheegay in in ka badan 15 qof oo dhaawac ah una muuqday ajaanib la arkay.
Waxay ka carareen goobo badan oo aagga dagaalka ka fog sida Saldhigga Kaaraan iyo Isgoyska Sanca, Waxaana la arkaye maleeshiyaad firxad ah oo wadada wadnaha si baqdin ku jirto u sii cararaye, sidoo kale waxaa dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan qeybo ka mid ah koofurta Magaalada iyo saldhigga ay ku leeyihiin halka loo yaqaano Maslax oo ku yaala deegaanka Suuqa xoolaha.
Dagaalku hadda wuxuu ku habeensaday baqa maleeshiyaadka iyo guul ay hantiyeen Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya oo caawa ku hoyana qeyba ka mid ah degmada Kaaraan.
Ciidamada Xoogga dalka oo ku sii jeeda Dagaalka galabta
Dhismaha Hotel Global
Taliyaha Ciidamada Lugta Soomaliya oo hogaanta dagaalka ku jira galabta Aagga hore
Maydka Askari ka tirsanaa shabaab oo ay uga cararareen wadada dhexdeeda
Askari wata qalabkiisa oo dagaalka ku sii jeeda galabta Mayd kale oo shabaab ka tirsan oo wadada looga cararay dagaalkii galabta
Sawir Qaade Abdirahim Adde.
warkan waxaan ka helnay dhinaca dowlada Login to post comments
1260 days since Kenya Army entered Somalia. Wararka Caafimaadka